Posted by ပြည့်စုံ at Monday, June 20, 2011 2
1. First Go To Megakey
2. Than download its MegaKey.exe file for PC
3. After Download Double click to open it and go to its MegaKey Benefits
4. See unlock MegaKey benefits and move your slider to last
5. Now just fill out the simple form .:
6. That’s It Wait for 24 Hours you will have Premium Account Ready for you to be Browsed.
Posted by K.K.H at Monday, June 13, 2011 1 comments
ဓာတ်ပုံတွေကို color ပြောင်းတာ clipart လေးတွေထည့်တာတွေကို click တစ်ချက်နှိပ်ပီးတော့ ပြောင်းလို့ရပါတယ် ဓာတ်ပုံလုပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲ ကျနော့်စက်ထဲမှာကိုတင် 60ကျော်လောက်ရှိပါတယ် နောက်ကြုံရင်ကြုံသလိုတင်ပေးသွားပါ့မယ်..လိုချင်တဲ့ ဖိုတိုဆော့လ်ဝဲရှိရင်လည်း ကွန်မန့်ထားခဲ့လို့ ရသလို cbox မှာပြောထားခဲ့လည်းရပါတယ်..ဒီကောင်လေးကတော့ Portable လေးပါပဲ...အောက်မှာဒေါင်းလော့ယူနိုင်တယ်...
ခေါင်းစဉ်: photoshop, Portable
AnvSoft Photo Flash Maker Professional 5.27(Full Version)
Posted by K.K.H at Sunday, June 12, 2011 0
Flash Maker လေးပါ .swf ဖိုင်းအဖြစ်လုပ်လို့ရသလို cd အခွေနဲ့ လည်းတိုက်ရိုက် အခွေ ရိုက်လို့ရပါတယ်..ပီးတော့ web album အဖြစ်နဲ့လည်း website မှာတိုက်ရိုက် upload တင်လို့ရပါတယ်....
serials ကီးလေးပါ ပါတယ်...fullversion လေးပါ ခင်ဗျာ....flash ဖိုင်လေးတွေကို အလွယ် တကူလုပ်လို့ရပါတယ်
ခေါင်းစဉ်: Flash, Software
Posted by ပြည့်စုံ at Wednesday, June 08, 2011 0
ကျနော်ဘာလို့ ဒီ post ကိုရေးရလဲဆိုရင်ကျနော်နောက်ပိုင်း window ခွေတွေနဲ့game တွေကို mediafire ကနေတင်တဲ့အခါအပိုင်းတွေများပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုများလာရင် IDM အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ နည်းနည်းလေးပိုပီးတော့ အဆင်ပြေပြေဒေါင်းနိုင်အောင်ပါ.။ ပထဦးဆုံး mediafire ကနေဒေါင်းမယ်ဆိုရင် မိမိဒေါင်းမည့်လင့်ခ်တွေအကုန်လုံးကို click here to start download > download later ပေးထားလိုက်ပါ.။ ပီးရင်တော့ IDM ကိုဖွင့်လိုက်ရင် download later ပေးထားတဲ့လင့်ခ်တွေအကုန် ၀င်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Start Queue > Start Main Download Queue ကိုပေးလိုက်ပါ။ လင့်ခ်တွေအကုန်လုံးကို auto ဒေါင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျန်တာတွေလုပ်လို့ ရတာပေါ့ဗျာ ။
ခေါင်းစဉ်: Downloader, others
Posted by K.K.H at Tuesday, June 07, 2011 0
Microsoft Office ကနေ ဖိုင်အမျိုးအစားတော်တော်များများကို ပုံထဲကလို
convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်လေးပါပဲ ..
Portable လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..
ခေါင်းစဉ်: Microsoft office
Aneesoft 3D Flash Gallery.v2.2 Full version(with serial)
Flash Gallery လေးတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာ 3D ပုံစံအလန်းလေးတွေနဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်... မိမိစက်မှာ
screen saver အဖြစ်နဲ့လဲထားလို့ ရသလို .exe,swf ဖိုင်လေးအဖြစ် မိမိကောင်မလေးတွေဆီ လုပ်ပီး ပို့လို့ရပါသေးတယ် :P ..HTML အဖြစ်နဲ့လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်..ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်တာကောင်းပါတယ်...အထဲမှာ serial လည်းပါပါတယ်..စမ်းကြည့်ချင်သူများ အတွက်.....
Hackers Underground Training 2010 (Ebook)
Posted by K.K.H at Sunday, June 05, 2011 0
Hacking ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Hackers Underground Training 2010 (Ebook) လေးပါ...
AntiPorn v.16 full version
Porn ဆိုဒ်တွေ ကို ကလေးတွေ မိန်းကလေးတွေ မကြည့်စေချင်ရင် ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ကောင်လေးပါ...ဒီကောင်လေးကို run ပီး ကြိုက်တဲ့ porn ဆိုဒ်တွေကိုဖွင့်ပါ မရပါဘူး..Porn ဆိုဒ်တော်တော်များများကလဲ virus တို့ Malware တို့ တော်တော်များများပါ ပါတယ် ..တစ်ချို့ကလဲ fake ဆိုဒ်တွေ ရှိပါတယ်.. hacker တွေရဲ့ ငါးစာပေါ့ :P .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မ၀င်မိအောင် ဒီကောင်လေးနဲ့လုပ်ထားလို့ရပါတယ်
patch ဖိုင်ပါ ပါတယ် အထဲမှာ...
Nero Multimedia Suite v.10 with keygen (full version)
Nero Multimedia Suite v.10 လေးပါ...3 Product 1 Solution(3 in 1) လေးပါ...Main Product အနေနဲ့
editing video, burning and backup ဆိုပီးပါဝင်ပါတယ်...ဓာတ်ပုံတွေကို Slide Show လည်းလုပ်လို့ရပါသေးတယ် ..အထဲမှာ keygen လေးလဲ ပါပါတယ်...အောက်မှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Spot On The Mouse v2.4.1
Posted by ပြည့်စုံ at Sunday, June 05, 2011 0
တချို့ ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြူပုံတွေကို video ဖိုင်နဲ့ ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင် mouse ထောက်ပြတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာလဲ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
Blogger Help (23)
Copyright 2011 MIPT-MYANMAR ™ , Designed By Wparchive | Bloggerized by New Blogger Themes.